Khadka-Soo-saarista Bacriminta Isku-darka Qalalan-qalajinta - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Waxaan leenahay waayo-aragnimo dhammaystiran oo ku saabsan khadka waxsoosaarka maqaarka ee qalalan. Waxaan kaliya diirada saareynin xiriir kasta oo xiriir ah ee habka wax soo saarka, laakiin sidoo kale marwalba waxaan qabsanaa faahfaahinta geeddi-socodka ee xariiq kasta oo wax soo saar ah oo si guul leh loogu guuleysto isku-xirnaanta. Nidaamka wax soo saarka oo dhameystiran waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee iskaashiga aad la leedahay YiZheng culus Makiinado Co., Ltd Waxaan ku siineynaa xalal wax soo saar oo xaddidan sida ku xusan baahida dhabta ah ee macaamiisha.
Khadka-soo-saarka Bacriminta ee No-qalajinta Qalalan waxay soo saari kartaa bacriminta isku dhafka sare, dhexdhexaad iyo hooseeya ee dalagyada kala duwan. Khadka wax soo saarku uma baahna inuu ahaado mid qallalan, maalgashi yar iyo tamar yar.
Guud ahaan, bacriminta isku dhafan waxay ka kooban tahay ugu yaraan laba ama seddex nafaqo (nitrogen, fosfooraska, potassium). Waxay leedahay astaamaha ku jira nafaqada sare iyo waxyeellooyin yar. Bacriminta isku dhafan ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa bacriminta isu dheelitiran. Kaliya ma hagaajin karto waxtarka bacrinta, laakiin sidoo kale waxay dhiirrigelinaysaa waxsoosaarka deggan ee sarreeya ee dalagyada.
Waxaan bixinaa xirmo dhammeystiran oo ah khadadka waxsoosaarka maqaar-soo-saarka maqaar-laaweyaasha aan qallalanayn ee aan u baahnayn in la qalajiyo. Qalabka xariiqda wax soo saarka badanaa waxaa ka mid ah mashiinka mashiinka wax lagu rito iyo qalabka wax lagu rido, qalabka mashiinka kala sooca duubista, mashiinka wax lagu dhejiyo, qalabka wax lagu raro suunka, mashiinka baakadaha ee otomaatiga ah iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah.
The granulator extrusion extrusion qalalan waxaa ka mid ah maaddooyinka si toos ah, conveyors suunka, fiicni bixial, feed disc, mashiinada granulation extrusion, shaandhooyinka rullaluistemadka, bakhaarrada dhammeeyey, mashiinada wax lagu baako otomaatiga ah, iwm.
2. Double Mashiinka Bacriminta fiicni
3. granulator extrusion duubista
5. Baakadaha Tirada elektarooniga ah